Ny krizin'ny Linuxphere miteny Espaniôla (fizarana 2) | Avy amin'ny Linux
Ny krizy an'ny Linuxphere miteny Espaniôla (fizarana 2)
Fantatrao Nandinika betsaka momba izany aho ny lahatsoratra mitovy anarana izay nosoratako herinandro vitsivitsy lasa izay, fa ny ankamaroany dia misy ny fanehoan-kevitra momba ny olan'ny lahatsoratra anglisy nadika tamin'ny Espaniôla ary tokony hiaiky aho fa maro amin'ireo fanehoan-kevitra ireo no marina. Hakamoana ara-tsaina ny fahaizana mianatra GNU / Linux ary tsy mahay mianatra anglisy. Ka ……….. Manomboka izao dia hanoratra zavatra tany am-boalohany aho.
Uboon2 tsara ally deecided 2 lisen 2 ry zareo dia kominista n prise D2 ity hira I'ma afaka Lenz fifanarahana ho marcoS trasladarvalelapenA dia nanosika D EFF JEREO SEA n sed U sirs r a totohondry Richard Pryority midika hoe whale Mandala Ñu dia manao kofehy miverina ao anatiny miakanjo f (1) amin'ny oder newz ny fahitan'ny tranonkala ny 2NOOB2installgentoo fitoeram-bokatra pwned bye lulcatz n @ ilay Pie Conf iz dia tsaho fa efa niainga niaraka tamin'i mr-hank i Adria Richards ary nandeha 2 efitrano 4 izy ireo nandritra ny fotoana fohy nanaovan'i tonz uv dongles jus toy ny aleXceitunne forks van pelt's kernel alldaylong with his long hard dongle butwhowasfone is trollman hu gabe up n left anao fsf 2Bcum a fashionista aftr Ballmr sed hell hamoaka ny code Windows 8 craken miaraka amin'ny peel jeep antsoina hoe fuckgnus andnaudetimeisubergutago2byastallchetanga happybriltontodia
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny krizy an'ny Linuxphere miteny Espaniôla (fizarana 2)
Misy zavatra miafina eo anelanelan'ny lahatsoratra, saingy tsy hitako.
Ilay fehiloha misy tarehin'i Stallman…. Tsy haiko na hihomehy na hitomany.
afaho ny craken!
Reny zanako, reniko zanako hahahahaha miala amin'ny fihomehezana aho.
TSY FAHAY FITIAVANA IZAO
Toy izany koa no mitranga amiko rehefa te hamaky zavatra voadika amin'ny Google Translate aho.
Marina fa tsy tonga lafatra ilay mpandika teny Google, fa nanomboka teo ka hatramin'izay nilaza fa fako dia misy tohotra goavambe enooooooooooooooooooooooooooooooooo.
Toy izao ny fisehoan'ny pejy fandraisana Debian rehefa misafidy ny hijery azy amin'ny teny Espaniôla izahay:
Ary izao no toa azy rehefa hitantsika nadika tamin'ny alàlan'ny fanampian'ny Google Translate:
Marina izany, tsy lavorary na dia akaiky aza.
Tsy mila rakibolana ve ianao?
Manampy be dia be koa amin'ny famakiana-boky-, ankoatry ny tombony hafa, mampianatra ny fisainana izy io, manome voambolana ary mamporisika ny fahaiza-manavaka sy ny fandinihana mitsikera.
raha ny GT dia mandika ny ambin'ny fiteny amin'ny valiny marina, dia saika tsy misy sakana amin'ny famakiana pejy amin'ny teny arabo, sinoa na soedoa, tokony hitsapana izany.
Ary mazava ho azy, ny sombin-pasika ihany no apetrakao fa tsy manandrana mandevona ny zava-drehetra dia manampy betsaka amin'ny fahatakarana sy ny fandikana ny dikanteny 🙂
"Hakamoana ara-tsaina ny fahaizana mianatra GNU / Linux fa tsy mahay mianatra anglisy"
- Tsara izany
Ny tsara indrindra dia ilay thong Richard Stallman ... hahaha.
Raha marina ny lazainy, ny zavatra mampalahelo dia ny tsy fahampian'ny bilaogy misy kalitao amin'ny fitenintsika ary mila mampiasa fiteny hafa isika.
Eny, mety ho izany, saingy toa melanolika kokoa izany noho ny tena izy.
Makà fitsapana: safidio ny lohahevitra tadiavinao, * ilay tianao * momba ny GNU / Linux ary tadiavo amin'ny Internet amin'ny Internet, vonona ve? azo antoka fa misy am-polony raha tsy an-jatony na an'arivony aza ny lahatsoratra momba azy io ary maro amin'izy ireo no mahatratra 10 na mihoatra ny taona.
Izao no ataovy amin'ny teny espaniola ...
Mazava fa tena azo atao tokoa fa izay tadiavina dia efa resahina sy voavaha - amin'ny Anglisy, eny.
Mora be ihany koa izy io: raha mianatra GNU + Linux ianao na momba an'izany teknolojia sarotra izany dia efa fantatrao fa mila anglisy ianao ary ny dingana manaraka dia ny manomboka mianatra azy io, na inona izany na inona, hanoherana, fa vonona hanao. izy ary raiso am-pitandremana.
Anglisy, fa tsy teôria na biochips, hoy izy.
(FYI dia iray amin'ireo resy lahatra aho fa ny teôlizy kofehy sy ny fototry ny teôria biolojika dia azo ianarana raha manana faniriana hanao izany isika; raha toa ka manana ny fahaizana sy ny toerana hanaovana azy isika dia manakorontana, toy ny Messi miaraka amin'ny baolina 😉
William moreno dia hoy izy:
Tena tsara, nampihomehy ahy 🙂
Valiny tamin'i William Moreno
Hahaha Tiako any Calambur izany. Na dia ankoatry ny atin'ny lahatsoratra aza dia miahiahy aho fa misy karazana hafatra ambanivohitra. Ary tiako ho fantatra hoe ohatrinona ny vidin'i Thallman an'i Stallman.
inona ny pitorreo xD
Jesosy cc dia hoy izy:
Ny fady dia an'ny lehilahy, vehivavy na unisex
Mamaly an'i Jesosy cc
Heveriko fa tsy misy zavatra maharikoriko kokoa noho ny mahita bandy ao anaty fehin-kibo, izay maharikoriko ilay antsoina hoe reny>: ¬ (
Ny thong dia noforonina noho izany, clown: http://www.radioestacion.com.ar/imagenes_noticias_c/andrea_rincon_angelito_tanga.jpg
Ny zavatra akaiky indrindra azon'ny tovolahy anaovana dia ny "sungas" anaovan'ny Breziliana, izay sady ratsy tarehy ihany koa no hita (izay tia mahita bandy mitanjaka !!!?) WTF
Tady ho an'ny vehivavy izany, satria ny tapany ambany amin'ny fehin-kibo dia ny "manarona" ny fivaviana, ny sehatra tokana azon'ny thong atao ...
Ajanony bolú, manondraka ny vavako! xD
Hahaha, tena tsara, tena tsara !!!
Raha ny amiko, mba hahamora kokoa ahy dia aleoko ny mamaky amin'ny teny espaniola, saingy misy ny olona milaza fa sarotra ny mitoraka bilaogy amin'ny fiteninay satria «ny fandikanteny google dia manamora ny famakiana bilaogy amin'ny teny anglisy», rehefa inona no ataon'io mpandika teny io (na inona na inona ny «hakamoana ara-tsaina» mijanona ao amin'ny olona tsirairay) dia asa misavoritaka.
Raha handika, amiko ny tsara indrindra dia ny Bing, ary na izany aza tsy anisan'ireo mandika lahatsoratra aho dia aleoko mamaky azy amin'ny teny anglisy na dia maharitra ela kokoa aza aho ... fa raha misy ny safidy hijerena an'io naoty io amin'ny Espaniôla amin'ny bilaogy hafa, eo no ahitako azy sy maneho hevitra.
Misy koa ireo milaza fa "ahoana raha vonona hianatra Linux ianao fa tsy anglisy?", Toy ny hoe nitovy izy ireo. Izahay dia miresaka momba ny fampitahana fomba fiasa amin'ny fomba fifandraisana (tsy hoe satria te hianatra mahandro amin'ny Bilbao ianao dia tsy maintsy mahafehy an'i Basque, na any France France; tsy miankina amin'ny teknikan'ny asa tokony hianaranao ny fiteny), ary ho an'ny INRI misimisy kokoa, mifandraisa amin'ireo teknika (na mivantana, fitenenana toy ny nomen'i diazepan ohatra ao amin'ity lahatsoratra ity).
Ny mombamomba ny vokatra iray navoaka tamin'ny teny anglisy dia zavatra iray, ary tsy misy ifandraisany amin'ny famoizan-tenan'ireo bilaogera (ireo izay manao izany, satria misy ny hafa manana ny antony manokana sy mitombina azy, toa an'i Picajoso handefa ny bilaogin'izy ireo manokana. ivelan'ny muylinux) satria heverin'izy ireo fa sakana ny mpandika teny fa tsy fitaovana hafa mivezivezy amin'ny tranonkala.
"Misy koa ireo milaza fa" ahoana raha vonona hianatra Linux ianao fa tsy anglisy? ", Toy ny hoe mitovy izy ireo."
FAHAMARINANA, NA TSY MISY, ha!
Andao hojerentsika ny toerana hanombohako ... oh eny, mampiseho ny hadalàn'ilay hevitra noteneniko:
1. Ny tetik'asa GNU sy Linux dia novolavolain'ny ekipa iraisam-pirenena izay fiteny lehibe ifandraisany amin'izy ireo dia -Guess- ENGLISH, ENY!
Tsy diso ny fiheverana fa ny fanehoan-kevitra sy ny fifampiresahana  mifandraika amin'ireo fivoarana misy eo amin'ny mpandahateny amin'ny fiteny iray ihany, sy _ amin'ny toetra manokana_ (ohatra, ny mailaka eo amin'ny mpamorona, sns.) Dia voasoratra (na miresaka momba ny videoconferensi) amin'ny fitenin-drazany, fa raha ny fampandrosoana miaraka dia ny teny voafidy dia ENGLISH.
2. Satria ny teny anglisy dia ny teny DE FACTO nofidina hampivoatra -to facto satria fiteny iraisan'ny rehetra io , na dia mety tsy tian'ny Taliban sasany sy ny tsy fanao aza- NY KOMENITRA AO AMIN'NY CODE dia voasoratra amin'ny teny anglisy. Ka: ilaina ve ny mianatra teny anglisy hampandroso? Ny valiny fohy dia eny. Ny iray tsy dia lehibe dia: miankina. Raha handeha hifindra ao amin'ny vondrom-piarahamonina voafetra iray ianao ary hiditra ao amin'ny fiteninao fotsiny ny fitaovana didaktika dia mety tsy mila mianatra ny teny Anglisy ianao hivoatra. Ankehitriny, raha te-hanao zavatra amin'ny fomba matotra, mitombina ary matotra ianao, dia fototry ny mianatra ny anglisy.
3. Satria ireo fiteny fandefasana fandaharana izay ampivelarana ny GNU + Linux dia novolavolain'ny mpandahateny Anglisy teratany na ny fananganana azy, ny fiasan'ireo fiteny ireo ary na ny semantika aza dia nesorina tamin'ny fiteny… ENY, ENGLISH !!! Izay rehetra efa nanao programa na INDRINDRA, na amin'ny fiteny inona na inona, dia ho hitany fa ny torolàlana momba ny fandaharana dia manana endrika semantisma sy ortografika entanin'ny ... ENGLISH!
Noho izany ny fianarana GNU + Linux (ity no fomba marina hanoratana azy raha te-hanisy fiovana isika) ary ny fianarana ny teny anglisy  dia misy ifandraisany amin'ny INTIMELY ary hadalana tanteraka ny manamafy raha tsy izany.
 ny fiteny manerantany dia manondro ilay fiteny azo takarina sy azo ampiasain'ny mpandahateny lehibe indrindra. Eritrereto hoe samy manana ny vondrom-piarahamonina misy fiteny roa lehibe indrindra i India sy i Shina - izay tsy ananan'izy ireo tany amin'ny firenena roa tonta, ka maro ny fitenim-paritra ilaozan'izy ireo - ka fiteny amina faritra manokana eto amin'izao tontolo izao ireo fiteny ireo mahatonga azy ireo ho universal, mahatonga azy ireo ho lehibe na ahoana na ahoana.
 Eny, ny Anglisy dia avy any Angletera, vahoaka tia ady sy mpanjanaka raha misy, izay nametraka ny fiteniny voalohany tany amin'ny nosin'izy ireo, ka nanangana an'i Great Britain (izay tsy miteraka fahasoavana ho an'ireo firenena sisa voarohirohy satria ) tsy Bretons izy ireo, b) ny firenena tsirairay avy dia samy manana ny kolontsainy sy ny tantarany ary ny fiteniny avy eo) ary avy eo amin'ny alalàn'ny mampiavaka azy - amin'ny heviny mahomby, ihany - ny politikam-bahiny amin'ny faritra sisa amin'izao tontolo izao.
Ny anglisy dia manana tantara mahatsiravina sy maharikoriko amin'ny fanaovana piraty amin'ny fomba fijery rehetra ary miaraka amin'izay dia manana ny Sabata, The Who, Purple, Zeppelin, ny tsiro mahafinaritra nanan-tantara ary ny vazivazy mahatsikaiky (Python, Hill, Black Books, IT Mpiasa an-tsambo sy an'arivony maro).
Na dia tsy tian'io aza ny mediocre dia manana kolotsaina miavaka i Angletera izay, tsy toa an'i Etazonia na firenena hafa, tsy mila mampiroborobo ny fivarotana sy ny fandresena ara-kolontsaina ny olona hafa, ny mifanohitra amin'izany aza dia mandresy ny faritra rehetra noho ny kalitaony sy avant-garde, saika am-bava.
Na izany aza, ary ny mifanohitra amin'izany, ny fitenin'izy ireo, na dia azo ampiharina sy mora ianarana aza izy io, dia tsy manana vintana hanohitra fiteny farany tsara tarehy _ toa ny Espaniôla na frantsay; Andao hanaiky fa ny hany hatsarana momba ny teny anglisy dia ny fomba fanononany an'i London Londres.
Miaraka amin'ny teboka tsara sy ratsy, miaraka amin'ny tantarany tsara sy ratsy, miaraka amin'izay rehetra asehony, ny anglisy dia ankehitriny - nandritra ny am-polony taona maro - ny fiteny izay ampitainy amin'izao tontolo izao, ny INTERFACE mamela ny Rosiana hiteny amin'ny latina iray Amerikanina ary miaraka amina aziatika. Ny fanoherana per-se hianarana anglisy dia adala, miaraka amin'ireo litera rehetra. Ary raha mbola ny teny Anglisy no fiteny ifandraisan'izao tontolo izao, RAHA MBA TE HIRAY TIA ANTSIKA ARY Hahafantatra izay mitranga eto an-tany dia mandeha hatrany ny filazanao fa mila mianatra teny anglisy ianao.
Mazava ho azy, ny bilaogy amin'ny teny espaniola dia miampy raha mbola - ary izany dia hevitry ny tena manokana - nosoratana tamin'ny teny espaniola nahafinaritra novakiana izy ireo, nampiditra ny fitenenana isam-paritra izay manome azy tsara kokoa.
Raha ny teknolojia izao, ary mahita ny ankamaroan'ny fotoana fa ny lohahevitr'ilay lahatsoratra novakiantsika tamin'ny teny espaniola dia efa voaresaka teo aloha - indraindray imbetsaka! - amin'ny teny anglisy, dia hadalana sahady ny a) manizingizina ny tsy hianatra Anglisy, b) mody fihenan'ny asa tsy manampy.
Ireo mpikatroka nasionalista na mpiaro an'i Cervantes dia tsy tonga mba hihetsika raha azoko antoka fa tsy fantatr'izy ireo ny nuances sy ny subtleties an'ny fitenintsika tsara tarehy ary tsy mampiasa teny 100 mahery isan-karazany izy ireo hifandraisana isan'andro.
Ny ankamaroan'ny bilaogy GNU + Linux sy ara-teknika dia nosoratan'ny olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao fa tsy noho izany antony izany dia misy Indiana , japoney, frantsay na ekoatoriana iray mahatsapa tsy dia karana loatra, vitsy ny japoney, vitsy ny frantsay na latsaka Ekoatoriana, fa tsy ny mifanohitra amin'izay, ny fahatsiarovany ny maha-Indiana, Japoney, Frantsay na Ekoatoriana dia mipoitra haingana kokoa ary mahatsapa ho akaiky kokoa ny taniny, ny kolontsainy izy ary farany, hatrany amin'ny fakany satria ny fifandraisana amin'ny olona any amin'ny faritra hafa ao amin'ny izao tontolo izao dia mahalala ny maha-izy azy manokana.
Fuck off, "Misy ireo izay milaza ihany koa fa" ahoana raha vonona hianatra Linux ianao fa tsy anglisy? " tena hadalana (dis) fanjohian-kevitra.
 Ny Hindou dia teny manondro olona iray izay milaza ho hindoisma. Ankoatry ny faharatsian'ny nampianaran'izy ireo anay sy ny fomba ratsy FITENERANANA "MPITSARA" INDRINDRA INDRINDRA, ny "adjectif" ho an'ny India dia "Indiana" tsotra izao.
Aiza no hanombohako hahafantaranao?
1.- Ity lohahevitra ity ary ny iray hafa, dia notenenin'ny USER sy ny bilaogy amin'ny fiteninay fa tsy avy amin'ireo vondrona fampandrosoana.
2.- Mitohy amin'ny fampandrosoana ianao, ary tsy izany ny olana, fa valiako ianao. Tsy ilaina ny mianatra fiteny iray hianarana fiteny fandefasana fandaharana, amin'izy ireo dia tsy jerenao ny fitsipi-pitenenana amin'ny fiteny (conjugation of verbs, tenses, synonyms, lohahevitra, predicates, sns.), Fa mijery ny fandaharana ianao fiteny.
3.- Ary omeo azy ny fiteny fandaharana sy ny tontolon'ny fampandrosoana.
Azonao ve ny fahasamihafana misy eo amin'ny fianarana mampiasa Linux sy ny fampivelarana rindrambaiko ho an'io tontolo iainana io sy ny firotsahana anaty vondrona fampandrosoana? Misy tsy fitoviana lehibe eo amin'ny zavatra heverinao ho hadalana amin'ny hevitro sy ny zavatra tratranao milaza an'io choro io.
Ny fahalalana ny dikan'ny teny (izay ianaranao amin'ny fiteny fandaharana) dia tsy mahay miteny an'io fiteny io; Afaka mianatra miarahaba amin'ny teny sinoa na japoney ianao, ary tsy midika izany hoe miteny azy ianao.
Na ndao handeha amin'ny lojikanao: satria Poloney-Rosiana ny vodka, raha misy te hahalala ny fomba fanandramana azy (izay zava-pisotro afangaroy na amin'ny fotoana mety ahazoana azy io), TSY MAINTSY Mahafantatra POLISY na RUSSIAN ianao… ..
Tsy izaho io dia hoy izy:
'uta ... ity karazan-kafatra ity dia sakafo ho an'ny troll.
Raha ny fiheverako tena manetry tena sy tsy manam-pahalalana, raha ara-teknika ilay teny ary amin'ny teny anglisy dia tazomy, makà sombin-tsiranoka ary tadidio rehefa tonga; Arak'izany dia sorohintsika na dia ny dikanteny ratsy, ny tsy fahazoan-kevitra ary ny tsiro.
Andao hojerentsika, iza no hahatakatra raha tsy DNS, ny fanafohezana "SdNdD" na "SND" dia napetraka? raha ny amiko dia tsy ho fantatro izay resahina amin'ny afobe.
Ohatra iray hafa, ny teny hoe "mpandahateny" amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao dia fantatra amin'ny hoe: "mpandahateny", "mpandahateny", "fiarovan-doha"? ... Total izay takianay hatrany amin'ny fandikan-teny mihatra amin'ny faritra misy anao. Ary tsy ny olon-drehetra no afaka mankafy azy.
Hatramin'izay dia tsy nanana afa-tsy boky momba ny siansa momba ny solosaina tamin'ny teny anglisy aho, ireo fandikan-teny tokana tsy tonga teto amin'ny firenentsika. Ka ny diksionera eny an-tànako sy amin'ny fiezahako dia tsy maintsy nandalina teknolojia maro mitsako sy mandrora amin'ny teny anglisy.
Farany, te hianatra siansa informatika ve ianao ary izay nianaranao sy ny fanohanana dia mety aminao na aiza na aiza? Mianara anglisy. Na atao tsianjery ireo teny teknika amin'ny teny anglisy sy ny famaritana azy ireo amin'ny teny espaniola.
Valio io fa tsy izaho
Amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny ankehitriny isika, saingy tsy ratsy ny mieritreritra ny ho avy, mianatra sinoa.
Ity tontolo ity dia voamarika mazava tsara ary notapahin'i Darwism. Izay mifanaraka tsara indrindra ihany no tafavoaka velona na excel.
ha! Tamin'ny '87 rehefa afaka nametraka ny tanako kelikely tamin'ny commode 16 (boky torolàlana amin'ny gringues) aho dia tsy nahalala momba ny sinoa fa ny iray tamin'izy ireo dia i Bruce Lee ary nino izy fa "Cheech sy Chong" dia sinoa mandritry ny andro iray Hitako ny fonon'ny rakipeo misy ny sary izay hitako fa tsy Sinoa. 🙂
Eny, ity fotoana ity dia toa tsara ny mianatra sinoa, na dia ny fampiasana ny ati-doha aza, satria miaraka amin'ity ubuntu / efa misy sinoa ity, azo antoka fa hisy fivoarana vaovao fa amin'ny teny sinoa. Mbola miala amin'ny sezako aho, tsy misy zavatra hafa mahita fa ny Office Kingsoft ho an'ny android dia miasa tsara amin'ny takelaka ary ity fivoarana ity dia sinoa araka ny tadidiko.
Fotoana famongorana ny sarimihetsika Bruce, Jackie ary Jet Li.
Saingy misy ny fiovaovan'ny fiteny, saika toy ny Linux distos ... ka inona no mety ho fiovana sinoa mba tsy haharesy anao?
Andao hanomboka hianatra sinoa amin'ny Rock Rock Shinoa nataon'i Ramones:
Manoro hevitra ny fiteny mandarin aho izay fiovaovana be mpampiasa indrindra
Marihiko: Mandarin… Fotoana google izao, karohy: chinesse for IT's…
wow, raha marina izany dia tsy ho mora ny asa 🙂:
"Mila fandalinana sy fampiharana mandritra ny taona maro vao manomboka miverina miverina sy mandroso amin'ny alàlan'ny sosona ny pitsiny feo efatra, dimampolo sy dimampolo fiteny."
- Ny fiainana iray dia tsy ho ampy amin'ity indray mitoraka ity, tsara kokoa ny ampianariko ny taranako hianatra ireo fiteny roa ireo (Anglisy sy sinoa), manantena aho fa ny Koreana Tavaratra sy ny olona adala mitovy amin'izany dia handao antsika 10 andiany fiainana hafa.
Iza no nametraka an'io lahatsoratra io? Dolan? DsdLinx Plz
Avy amin'ny Linux .. veloma, ry zaza